Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ny NH Hotels dia manambara ny hisian'ny debut any Moyen Orient ho avy
Amin'izao fotoana izao amin'ny dingana farany amin'ny fampandrosoana dia hanokatra ny varavarany amin'ny volana desambra ny fananganana NH-533 manan-danja NH Dubai The Palm.
NH Dubai The Palm no ho voalohany amin'ireo marika natomboka tany Moyen Orient
Miorina ao amin'ny Palm Jumeirah NH Dubai any Dubai The Palm dia hiditra ao amin'ny Seven Hotel & Apartment
Fananana vaovao dia hanolotra efitrano fandraisam-bahiny 227 sy efitrano fandraisam-bahiny, ankoatry ny trano misy serivisy 306
Marika fandraisam-bahiny antonontonony sy avo lenta, NH Hotels, no hanomboka amin'ny faritra Atsinanana afovoany amin'ity taona ity miaraka amin'ny fanombohan'ny NH Dubai The Palm. Amin'izao dingana farany amin'ny fampandrosoana izao dia hanokatra ny varavarany amin'ny volana desambra ny fananana trano vaovao 533 manorina.
Ao amin'ny Palm Jumeirah any Dubai, mari-pahaizana manerantany, NH Dubai The Palm dia ho tafiditra ao amin'ny Seven Hotel & Apartments, fivoarana fampiasa mifangaro izay misy ny trano fandraisam-bahiny sy tilikambo fonenana. Ho mora azo ny trano fandraisam-bahiny amin'ny vatan-kazo lehibe The Palm, mifanakaiky amin'ny tsenambarotra lehibe indrindra amin'ny The Palm ary akaikin'ny Palm Fountain ao The Pointe, izay natomboka vao haingana ho loharano lehibe indrindra manerantany. Ireo toerana fizahan-tany manan-tantara hafa ao Dubai, anisan'izany ny Burj Khalifa, Dubai Mall ary Dubai Marina dia mora azo avokoa.
Ny fananana 14-rihana vaovao dia hanolotra efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny 227, ankoatry ny trano misy serivisy 306.
NH Dubai The Palm dia tompona trano sy mpanamboatra fandraisam-bahiny fito Tides, miaraka amin'ny portfolio misy Anantara The Palm Dubai Resort sy Oaks Ibn Battuta Gate.
Dillip Rajakarier, CEO Minor Hotels, dia naneho hevitra hoe: "Faly izahay mitondra ny NH Hotels any Moyen Orient ary ny fandefasana any Dubai dia mety amin'ny marika. Ny trano fandraisam-bahiny dia hameno tsara ny portfolio misy ny hotely Minor izay miasa ao an-tanàna, miaraka amin'i Anantara, Avani ary Oaks, izay manitatra ny tolotra omena ho an'ireo vahininay. Manantena ny hitondra an'ity hotely vaovao mahafinaritra ity izahay eny an-tsena hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miasa aminay Seven Tides. "
Abdulla bin Sulayem, tale jeneralin'ny Seven Tides, dia naneho hevitra ihany koa: "Nanorina fifandraisana akaiky amin'ny Minor izahay nandritra ny valo taona lasa, tamin'ny fanombohana ny Anantara The Palm Dubai Resort tamin'ny taona 2013. mameno ny Anantara ary manomeza vahana varotra miampita miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny Oaks Ibn Battuta Gate Hotel, fananana Seven Tides iray hafa izay eo ambany fitantanan'ny Minor. "
NH Dubai The Palm no ho marika voalohany hanomboka any Moyen Orient ary hanatevin-daharana portfolio efa misy trano maherin'ny 240 NH Hotels, izay fantatra amin'ny kalitaon'ny serivisy sy ny fotodrafitrasa ananany. Ny trano fandraisam-bahiny NH dia hita any amin'ny toerana misy tanàna tsara indrindra eran'i Eropa, any Amerika atsimo sy afovoany ary any Karaiba, mampifandray ireo vahiny amin'ny tanjona lehibe sy toerana fialamboly.